Miller Camera အထောက်အကူပြုပစ္စည်းကိရိယာများကို Joseph White ကိုဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ် Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းကိရိယာငှားရမ်းယောသပ်သည်အဖြူရောင်
ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ် Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းကိရိယာငှားရမ်းယောသပ်သည်အဖြူရောင်
ဆစ်ဒနီ, အောကျတိုဘာ 30, 2015-Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းကိရိယာ, ကင်မရာကိုထောက်ခံမှုဖြေရှင်းချက်တီထွင်ဆန်းသစ်၏ထုတ်လုပ်မှုခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, ကငှားရမ်းထားသည်ဟုကြေညာဖို့ကျေနပ်ဖြစ်ပါသည် ယောသပ်သည်အဖြူရောင် as ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာအာရှနှင့်အာဖရိက။ အဖြူရောင်ကဤဒေသများအတွင်း Miller ကထုတ်ကုန်လိုင်းများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ချဲ့ထွင်ပါလိမ့်မယ်။
"ကျနော်တို့ကယောသပ်သည် Miller ကအသင်းကို join ရှိသည်ဖို့အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်" ဟုချားလ်စ် Montesin, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာ Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းကပြောပါတယ်။ "လက်ပေါ်မှာငါတို့ထုတ်ကုန်များ၏အသိပညာနှင့်အတူပေါင်းစပ်သူ၏ကျယ်ပြန့်ရောင်းအားအတွေ့အကြုံကို, အာရှနှင့်အာဖရိကအတွင်းအမှတ်တံဆိပ်တိုးပါလိမ့်မယ်။ ဤအစျေးကွက်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုကျွန်တော်တို့ကို excites, ကြှနျုပျတို့ကဤဒေသများ၌အကြှနျုပျတို့၏အသုံးပြုသူများရဲ့အရည်အသွေးကကင်မရာအရံပစ္စည်းထောက်ပံ့အားမိမိဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
White ကအများဆုံးမကြာသေးမီကဦးဆောင်လက်လီအရောင်းဆိုင် Harvey Norman ကွန်ပျူတာများမှာရောင်းအားအတွက်ခိုင်မာတဲ့သမိုင်းရှိပါတယ်။ တာဝန်ခံမန်နေဂျာထဲတွင်ဒုတိယသကဲ့သို့, သူကုန်သွယ်, display တွေနှင့်စတော့ရှယ်ယာပစ္စည်းကိရိယာများပမာဏစီမံခန့်ခွဲမယ့်အဖွဲ့ကကြီးကြပ်။ သူလည်းဒေသခံအသစ်နှင့်ထွန်းသစ်စစျေးကွက်စိုက်ပျိုးအဖြစ်စျေးကွက်နှင့်မြှင့်တင်ရေးနှင့်အတူကူညီခဲ့။ White က Tiffen အင်တာနေရှင်နယ်, စားသုံးသူများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံရိပ်များအတွက်ဓာတ်ပုံပြပွဲ filter များ, မှန်ဘီလူးဆက်စပ်ပစ္စည်း, software နှင့်ကင်မရာဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အဆိုကိုရုပ်ပုံနှင့်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ မိမိအတာဝန်များကိုသူတို့အားစျေးကွက်များတွင်အလုပ်ရုံများနှင့်လေ့ကျင့်ရေး running အတူဥရောပနှင့်အာရှတစ်လျှောက်လုံးထုတ်ကုန်ဆန္ဒပြပွဲများညှိနှိုင်းပါဝင်သည်။ သူလည်းသူကအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများနှင့်ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးရှိရာ Queensland ပြည်နယ်အရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ် Lemac ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်ရှင်ငှားရမ်းမှုအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။
"ကျွန်မရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်. အလွန်အမင်းစိတ်အားထက်သန်ဖြစ်၏," White ကပြောလိုက်ပါတယ်။ "နှစ်ပေါင်းများစွာတစ် Miller က tripod အသုံးပြုသူအဖြစ်, ငါကငါအမှန်တကယ်ယုံကြည်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဖို့အခွင့်အလမ်းရဖို့ငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်မြင့်မားသောအချက်ဖြစ်ရှာပါ။ "
White ကပထမဦးဆုံးနောက်ဆုံးမှာကင်မရာအော်ပရေတာများနှင့်, တစ်ထုတ်လုပ်မှုဒါရိုက်တာအဖြစ်သူတစ်ဦးနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာကုမ္ပဏီရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘယ်မှာ Mackay, သြစတြေးလျအတွက် Channel ကို7မှာ Miller ကမှမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ သူကနောက်ပိုင်းမှာသူတစ်ဦးကြော်ငြာရောင်းအားအလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်, နောက်တဖန်, Miller ကထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုဘယ်မှာ WIN တီဗီ, ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
"ကျွန်မရိုးသားစွာငါ Channel ကို7နှင့် WIN တီဗီသတင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှစ်ဦးစလုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်အခါနှစ်ပေါင်းရိုက်ကူးငါ့ကိုစောင့်ရှောက်သောအလွန်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုဖောက်သည်တစ်ဦးမှပြောနေတာစိတ်လှုပ်ရှားရနိုင်," အဖြူရောင်ပါတယ်။ "လူဘယ်နှစ်ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်အကြောင်းကိုသည်ဟုဆိုနိုင်သနည်း ကျွန်မကင်မရာ-ထောက်ခံမှုနည်းပညာ၏ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းပေါ်သောကုမ္ပဏီ၏ထောက်ခံမှုရှိ သိ. 'ညာဘက်ခံစား' '၏ Miller ကရဲ့ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူနေ့ရက်တိုင်းရဲ့စိန်ခေါ်မှုများချဉ်းကပ်ပါလိမ့်မယ်။ "
1954, Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းဒီဇိုင်းများခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ကင်မရာအော်ပရေတာများအတွက်ထောက်ခံမှုပေး, ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အကြီးအကဲများနှင့် tripod ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်တတ်၏။ စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ပိုမိုထက်ခြောက်ဆယ်အနှစ်ကိုဂုဏ်ပြုသော, Miller ကခေတ်ပြိုင်ကင်မရာထောက်ခံမှု၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးသက်တမ်းကြာ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးသူက 1946 အတွက်ရရှိသောအရာရုပ်ရှင်ကင်မရာများအတွက်အရည်ခေါင်းကိုဒီဇိုင်းများအတွက်ပထမဦးဆုံးမူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသည်။ ယနေ့ Miller ကယ့် tripod နဲ့ camera ထောက်ခံမှုစနစ်များကိုမကြာခဏ 65 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ကွန်ယက်များ, ထုတ်လုပ်မှုအိမ်များ, ကော်ပိုရိတ်ပညာရေးနှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့်အီလက်ထရောနစ်သတင်းစုဝေး (ENG), အီလက်ထရောနစ်လယ်ကွင်းထုတ်လုပ်မှု (EFP), နှင့်ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကို applications များစဉ်အတွင်းအသုံးပြုကြသည် ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက + 6129439 6377 သို့မဟုတ်အလည်အပတ်ခေါ်ပါ www.millertripods.com ။
Spotify သည် 'Spotify Singles' Playlist ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် DPA သို့ပြောင်းသည် - မေလ 20, 2020
DPA Microphones ၏ MMA-A Digital Audio Interface သည်အလုပ်မှအိမ်မှထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် - မေလ 14, 2020
Grand Prize ဆုရှင် KRK Guitar Solo ပြိုင်ပွဲအတွက်ကြေငြာခဲ့သည် - မေလ 7, 2020
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-10-30
ယခင်: ဘာ? တစ်ဦးကတောက်ပထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဆူညံ FAN မပါဘဲ LED?
နောက်တစ်ခု: CCW 2015 မှာ Solutions ၏ TSL ကုန်ပစ္စည်းများဟန်ပြနောက်ဆုံး Range